सुवर्ण समशेरलाई प्रधानमन्त्री बनाएको भए पञ्चायत आउने थिएन !
त्यो पुस १ गते राजा महेन्द्रले वीपी कोइरालाको जननिर्वाचित सरकारलाई ‘कु’ नगरेको भए नेपालको अवस्था के हुन्थ्यो ? यो प्रश्न मलाई अहिले धेरैले सोध्ने गर्छन्, तर यसमा कुनै जवाफ छैन । ०१७ साल पुस १ गतेको त्यो ‘कु’ ले मेरो राजनीतिक जीवनले कहिल्यै नफर्किने गरी नयाँ मोड लियो ।
वास्तवमा राजा महेन्द्र वीपीसँग यसरी आत्तिए, उनले केही दिन कुर्ने धैर्य पनि राख्न सकेनन् । वीपीले त राजीनामा दिएर सुवर्ण समशेरलाई प्रधानमन्त्री बनाउने सहमति सुशीला भाउजूकै मध्यस्थतामा भइसकेको थियो । म त ती सबै घटनाक्रमको साक्षी थिएँ । मैले नगर्नुस् भन्दाभन्दै राजा महेन्द्रले गरिहाले । सायद सुवर्णलाई प्रधानमन्त्री बनाएको भए पुस १ को घटना हुने थिएन ।
म वीपीको भाइः मन्त्रीहरुको गोठालो
त्योबेला वीपी कोइराला कांग्रेसको दुई तिहाइ बहुमतको सरकारको प्रधानमन्त्री । अनि मचाहिँ संसदीय दलको प्रमुख सचेतक । प्रमुख सचेतक भनेको मन्त्रीहरुको गोठालोजस्तै पद हो । सायद मलाई विश्वास गरेर वीपीले त्यो जिम्मेवारी दिनुभयो । किनकि म कोइरालानिवासमै हुर्किएकाले भाइसरह व्यवहार गर्नुहुन्थ्यो ।
मैले ०१५ सालको आम चुनावमा चितवन निर्वाचन क्षेत्रबाट जितेको थिएँ । सत्तारुढ दलको प्रमुख सचेतकका हैसियतमा सान्दाजु (वीपी) सँग त सधैं नजिकमै हुने नै भएँ । राजा महेन्द्रसँग पनि मेरो बारम्बार भेटघाट र छलफल भइरहन्थ्यो । उनले त्योबेला मलाई किन नजिक बनाउन खोजे भन्ने चाहिँ पछि थाहा भयो ।
तर, पनि मलाई लागिसकेको थियो, एउटै जंगलमा दुईवटा बाघ अट्न सक्दैनन् । वीपी र महेन्द्र दुबै बाघ हुन् भन्ने मेरो बुझाइ भइसकेको थियो । राजाले कुनै पनि बेला गडबडी गर्न सक्छन् भन्ने संकेत पनि पाइसकेको थिएँ । तर, त्यो ढंगले ‘कु’ गर्लान् भन्ने लागेको थिएन । किनकि वीपीले छाडेर सुवर्ण समशेरलाई प्रधानमन्त्री बनाउने जानकारी पनि मैले राजालाई दिइसकेको थिएँ । उनले चाहेको पनि त्यही थियो, वीपी प्रम नहून् भन्ने ।
पुस १ को पृष्ठभूमि
पुस १ को ‘कु’ को घटना गर्नुअघि नेताहरुलाई एक वचन सोध्ने महेन्द्रसँग तागत नै थिएन । किनकि यिनीहरु (राजाहरु) अगाडि बोल्ने मान्छे हैनन्, फ्याट्ट गर्ने हुन् । सामन्तीहरु साह्रै बोल्ड (साहसी) हुँदैनन्, कायर हुन्छन् । तर, बिगार्ने बेला बिगारिहाल्छन् । उल्टो काम गर्दिहाल्ने ।
तर, पुस १ गतेको घटना हुनेबेला चाहिँ म नेपालमा थिइनँ । संयुक्त राष्ट्र संघको महासभामा भाग लिन अमेरिकाको न्यूयोर्क गएको थिएँ । जानुभन्दा अगाडि मैले महेन्द्रलाई भनेको थिएँ, ‘म नआउन्जेल केही पनि नगर्नुहोला ।’ किनकि उनले केही गर्दै छु भनेर पहिल्यै भनिसकेका थिए । पछि म फर्केर आएपछि एक भेटमा महेन्द्रले भने पनि, ‘तिमीले भनेको कुरा मैले बुझे पनि बाध्यताले तत्कालै यो कदम लिनुपर्‍यो ।’
वीपीले राजालाई आदर गर्न जानेनन्
पावरमा बस्नेहरुको झगडा हुनु स्वाभाविकै हो । अहिले दलहरुमा मेल नभएजस्तै हो । सत्ताका लागि पार्टीका नेताहरु त झगडा गर्छन् भने राजा त झनै बानी बिग्रेका मान्छे हुन् ।
गाउँका जिम्मावाल, मुखियाहरु हामी पढेलेखेका ठिटाहरु गएर नमस्ते गरिदियो भने दंग पर्थे । खानदानी केटो हो, बडो नम्र छ भन्थे । नमस्ते नगर्नुस्, ठूलो भएर हिँड्यो, बाउचाहिँ आएर मकहाँ दिनभरि बस्थ्यो, आज छोरो चाहिँ काठमाडौं गएर बिग्रेछ भन्थे । यो सामन्ती तरिका हो ।
हामी बिराटनगरको मान्छेलाई जी-हजुरी थाहा नै थिएन । कसैले बोलायो भने ‘हजुर’ भन्नुपर्छ भन्ने मात्रै जान्दथ्यौं । घरमा नेपाली बोलिन्थ्यो, गाउँघरतिर गयौं भने मैथिली बोल्थ्यौं, स्कूलमा गए हिन्दी र पढ्न बनारसमा बस्दा अंग्रेजी बोल्थ्यौं । चारवटा भाषा हामी बिराटनगरमा बस्नेले बोल्नैपथ्र्यो । वीपीलाई आदरभाव के हो भन्ने थाहा थिएन ।
वीपी त मभन्दा पनि बिग्रेको मान्छे
बिराटनगरबाट काठमाडौं आउँदा त सबै हजुर र बक्सियोस् मात्र भन्छन् । सुन्नै र बुझ्नै पनि गाह्रो, यो के भाषा हो भनेजस्तो । म थापा परिवारको भएकाले मेरो परिवारमा चाहिँ हजुर सम्बोधन पहिल्यैदेखि थियो । तर, बनारसमा बस्दासम्म पनि मलाई त्यसबारे थाहा थिएन ।
जी-हजुरीका यी भाषा वास्तवमा वीपीलाई थाहा थिएन । वीपी त मभन्दा पनि बिग्रिएका मान्छे ! किनभने भारतमै बढ्ता बसे, उतै पढे । यसैले उनी सामन्ती भाषासँग अभ्यस्त थिएनन् ।
राणा-ठकुरीहरूलाई त ‘हजुर’ र ‘सरकार’ भन्नैपर्थ्यो । ठकुरीलाई राजा नभन्दा मन पर्दैन । पहाडतिर ठकुरी जातका भरियाहरु समेत राजा नभनिकन भारी नबोक्ने मैले देखेको छु । सामान्यतया मान्छेलाई चाकडीको भाषा मन पर्छ ।
खासमा राजा र वीपीको साह्रै मेल थियो । मान्छे मन पर्ने, व्यवहार भने मन नपर्ने । वीपीले राजालाई कहिल्यै पनि चाकडीको भाषा प्रयोग गरेनन् । राजाले चाकडी गर चाहिँ नभन्ने, तर अपेक्षा चाहिँ राख्ने । कुरो यहीँबाट रड्कियो ।
महेन्द्रलाई सोधेँ- सरकार देवता हो ?
पुस १ गतेको काण्डबाट म पञ्चायतमा लागेपछि एकचोटि मैले महेन्द्रलाई भनेँ, ‘सरकार देवता हो ? हामीले पो देवता मान्दिएको त ! राजालाई विष्णुको अवतार भनिदिएको हामी नेपालीले हो । सरकारले आफूलाई विष्णु भगवान् ठान्नुहुँदैन । सरकारलाई मेरो मनको कुरा के थाहा छ ? मान्छे कति फटाहा हुन्छन्, उल्लु हुन्छन्, के थाहा हुन्छ !’
म अलि मुफट खालको थिएँ, बिराटनगरमा हुर्किएकाले चिल्लो बोल्न आउँदैनथ्यो । राजाले मलाई जे पायो त्यही बोल्ने ‘प्यारप्यारे मन्त्री’ भन्थे ।
प्रधानमन्त्री भएपछि वीपीलाई महेन्द्रले साह्रै मन पराएको हो । यद्यपि वीपी प्रधानमन्त्री नबनून् भन्ने उनको जोडबल त छँदै थियो । राजाले भन्ठाने, यो मान्छे कन्ट्रोलमा आउँदैन । तेज त तेज छ, तर म सधैं सावधान हुनुपर्छ यसबाट । प्रतिस्पर्धीको भावना थियो दुवैमा ।
म भन्थेँ पनि, वनका दुइटा बाघ हुन् यिनीहरु । ङ्यारङ्यार गरिहाल्छन् । एउटाको जनतासँग बल थियो, अर्कोको सत्ताको बल थियो ।
वीपी त त्यसबेला जनताबाट चुनिएका प्रधानमन्त्री थिए, राजाप्रति ‘लोयल’ पनि थिए । नभए त राजा चाहिन्छ भन्ने नै थिएनन् । उनको व्यवहार चाहिँ प्रजातान्त्रिक थियो । जुन व्यवहार दरबारमा त्यति सह्य थिएन ।
सुशीला भाउजूले वीपीलाई प्रम नबन्नुस् भनिन्
त्योबेलामा वीपी प्रधानमन्त्री नभएका भए पुस १ को घटना हुने थिएन त भन्ने हाइपोथेटिकल प्रश्न पनि गरिन्छ । यथार्थ के हो भने त्यसबेला सुवर्ण समशेरलाई प्रधानमन्त्री बनाएको भए पञ्चायत आउने थिएन होला । अलिपछि आउँथ्यो होला ।
खासमा वीपीलाई प्रधानमन्त्री हुन दिन्नँ भनेर सुशीला भाउजूले भनेकी थिइन् ।
अब पुग्यो, कैले मातृकाप्रसादसँग झगडा, कहिले कोसँग झगडा, सत्तामा नबस्नुस् भनेर भाउजूले भन्थिन् । मेरो त उनीसँग देवर-भाउजूको रुपमा नजिकैको सम्बन्ध थियो ।
राजालाई भनेँ- सुवर्ण प्रम हुन्छन्, चिन्ता नलिबक्स्योस्
हाम्रो पार्टी नेपाली कांग्रेसको कार्यसमितिको बैठक थियो, त्योबेलामा सुशीला भाउजूले भन्नुभएको थियो, ‘एक वर्षजति वीपी प्रम हुने भनेर । त्यसपछि सुवर्णलाई जिम्मा लगाउने कुरा भएको हो । त्यसमा वीपी सहमत भइसकेका थिए ।
मैले राजालाई पनि यो कुरा सुनाएको थिएँ । राजासँग मेरो राम्रै थियो, मूल घर गोरखा भएको नाताले । म त भीमसेन थापाको खलकको मान्छे ।
मैले राजाको मनोदशा बुझेरै भनेको थिएँ, ‘सुवर्णजी आफैं हुन्छन् प्रधानमन्त्री, चिन्ता नगरिबक्सियोस् । वीपी नेता भएर बस्छन् । सुवर्ण र विपीको मेल पनि छ । गाह्रो पर्दैन ।’
वीपीले पनि मलाई भन्नुभएको थियो, सुवर्णलाई छोड्दिन्छु भनेर ।
तर, त्यहीबीचमा म राष्ट्र संघको महासभामा भाग लिन न्यूयोर्क जानुपर्‍यो । पुस १ को परिवर्तन हुँदा म नेपालमा थिइनँ भनेर माथि नै भनिसकेँ । मैले वीपी र राजा दुबैलाई भनेको थिएँ, ‘मलाई पर्खिनुस् है, म नआउन्जेल केही नगर्नुस् है ।’
वीपी पनि महासभामा गएर एक महिनामा फर्किए । मैले तीन महिना बस्नुपर्‍यो ।
वीपीलाई न्यूयोर्कमै भनेको थिएँ, ‘सान्दाजु, तपाईँसित राजा रिसाएका छन् । विचार गर्नुहोला ।’
पछि मलाई वीपीले भने, ‘तैंले मलाई भनेको थिइस् । म रामेछाप जान थालेको थिएँ, उताबाट आएर (राजीनामा) गर्छु भन्ने ठानेको थिएँ, टाइमिङ मिलेन । राजाले आत्तिएर चेन्ज गरिहाले ।’
महेन्द्रलाई मनको बाघले खायो
बाह्य परिस्थितिले भन्दा पनि
Surreal Natural Places In Nepal You Must Visit Before You Die
Funny superstition believed to cause bad omen in Nepali culture
Nepal: An example for the progressive country interms...
३१ चैत्र २०७३ १६:२५
नेपाली राजनीति र सामाजिक संजाल
१८ जेष्ठ २०७४ १०:३५
Nepalese national flag: The real reason behind the...
८ बैशाख २०७४ ११:३५
पूर्व रास्ट्रपतिको घरभाडा तिरिदिनु पर्यो भन्दै पत्रिकामा घर...
२० कार्तिक २०७४ ११:३३
The corrupt bureaucracy leading Nepal backwards in Global...
३० चैत्र २०७३ १९:३३
The day I felt responsible towards my country...
११ बैशाख २०७४ ०८:०१